Translate Gujarati to Myanmar (Burmese) | Multilang.space
translate Gujarati to Myanmar (Burmese), Gujarati to Myanmar (Burmese) translations, Gujarati to Myanmar (Burmese) Google Translate ,
હેલો, તમે કેવી રીતે છો မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား
કોઈ પણ છે? မည်သူမဆိုရှိပါသလား?
હું તમને ખરેખર ખૂબ જ પ્રેમ કરું છું ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်အရမ်းချစ်ကြ
આ હેમબર્ગર ખર્ચ કેટલી છે? ဒီဟမ်ဘာဂါဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ,
તમે મને ટેક્સી કહી શકો છો? သငျသညျအကြှနျုပျကိုတက္ကစီခေါ်ခြင်းနိုင်သလား?
હું દિલગીર છું ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူး
માફ કરશો တဆိတ်လောက်
મને રૃચી છે ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို
મારી ફ્લાઇટ વિલંબ થયો အကြှနျုပျ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့သညျ
હું વ્યવસાય માટે અહીં છું ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို
નમસ્કાર, મારું નામ છે မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည်
હું દિલગીર છું, પણ હું લગ્ન કરું છું ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို
હું તમને પૂછવા માંગુ છું ငါသည်သင်တို့ကိုမမေးချင်ပါတယ်
તમે એરપોર્ટ પર લઈ શકો છો? သငျသညျလေဆိပ်ကိုငါ့ကိုယူနိုင်သလား?
હમણાં સમય શું છે, કૃપા કરીને? ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ
નજીકના પોલીસ સ્ટેશન ક્યાં છે? အနီးဆုံးရဲစခန်းဘယ်မှာပါလဲ?
શું હું તમારો ફોન ચાર્જર ઉછીનું કરી શકું છું? ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား?
તમે મને મદદ કરી શકો છો? ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား?
કૃપા કરીને મને પીણું આપો? ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ?
તેની કિમત કેટલી છે? ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ?
હું ધાન્યના લોટમાં રહેલું નત્રિલ દ્રવ્ય માટે એલર્જિક છું ငါ gluten မှမတည့်ဘူး
ડૉક્ટરને બોલાવો ဆရာဝန်ခေါ်ပါ
શું ડૉક્ટર છે? ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိပါသလော
શું હું કૉલ કરી શકું છું? ငါဖုန်းခေါ်ရနိုင်မလား?
મને તમારા બોસને ફોન કરો. ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။
આ સ્થળ ખૂબ સરસ છે ဤအရပ်ဌာနကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်
મહેરબાની કરીને મને હોટેલમાં લઈ જા ဟိုတယ်မှငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးယူပါ
મારી રૂમ નંબર શું છે? အခန်းထဲမှာအရေအတွက်ကဘာလဲ?